मात्र चियर्स गर्न बाँकी छ - साहित्य - साप्ताहिक
समाधिस्थल उर्फ एस्ट्रेतिर चुरोटको ठुटो लग्दै सारा बोली, ‘जीवनभर दुख्ने फूलहरूको शालीन चुम्बनभन्दा मल्हम लगाएर ठीक हुन सकिने काँडाको चुम्बन नै ठीक ।’
‘त्यसो भए तिमी काँडा ?’
टाउको हल्लाइन् ।
‘भनेपछि त काँडासँग पनि सौन्दर्य हुँदो र’छ है ?’
‘अवश्य पनि । काँडासँग संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित सौन्दर्य हुन्छ ।’ आत्मविश्वासका साथ गाढा रातो लिपिस्टिक लगाएको ओठ तलमाथि चलाइन् ।
‘तर मलाई त तिमी फूलजस्तै लाग्छ ।’
‘एक्सक्युज मी ! ओह !’ (कस्तो कमान्डिङ भ्वाइस) थाहा छ त तिमीलाई । फूलहरू सधैं सुरक्षाभित्र हुन्छन् र असुरक्षित हुन्छन् । पिल्सिएर बाँचेका हुन्छन् । दुखेर बाँचेका हुन्छन् । प्रतिशोधको भावना बढी हुन्छ । खास अपराधी छुट्याउन सक्ने चेतना हुँदैन । त्यही भएर निर्दोषहरू बढी सिकार हुन्छन्, तर यी मलाई तलदेखि माथिसम्म हेर त ! (तीन–चार इन्चजतिको ब्ल्याक हिल । दाहिने हिल मास्तिर एउटा ट्याटु । जिन्सको ग्रन्ज गरिएको खैरो स्कर्ट । देब्रे काँधको सिमाना नाघेको एक्सएल साइजको ह्वाइट टिसर्ट । काँधमा रातो डोरी छालासँग बेस्सरी टाँस्सिएको ।
केही कुरालाई जोडले अँठ्याइरहेजस्तो देखिने । दशगजाजस्तो सर्लक्क उभिएको नाक । जोकोहीले हेरिरहन नसक्ने आँखा । कर्ली केश । यतिसम्म देखे एकपटकको हेराइमा । उनी बोल्दै गइन् ।) ‘यदि म फूल हुँदो हुँ त सायदै यो ओछिइरहेको साँझमा निर्धक्क भएर बस्थेँ हुँला । त्यो पनि यस्तो कामुक पुरुषसँग जसले जतिबेला पनि आक्रमण गर्न सक्छ ।’ (यति भनेर मेरो औँलाबाट चुरोट खोसी र लामो पफ तानी) ‘मलाई अचानक के भयो यार !’ इत्रिँदै भनेँ ।
‘के भयो ?’ आँखा जुधाइन् । ओहो ! कति तिखा आँखा । बेस्सरी घोच्यो मलाई, तर कस्तो आनन्द !
‘काँडालाई चुम्न मन लाग्यो !’ एक पफ फिस्स हाँस्दै भनेँ ।
‘मान्छे हेर्दा बच्चै छ, कुरा गर्छ ठूलाठूला ।’ भन्दै कफीलाई अन्तिम पटक चुमी । वसन्तपुरको विश्राम क्याफेको माथिल्लो तलाको छेउतिरको टेबलको छेउतिरैबाट एक हरफ पराजित मुस्कान फ्याकिदिएँ । बोल्न मन लागेन । वेटरलाई बोलाइन् । बिल तिरिन् । बिल तिर्दिनथें प्राय: म ।
टेबलबाट उठिन् जाउँ भन्ने आशयका साथ । उठेँ म पनि । हामी बाहिर निस्कियौँ । साँझ अतिथि बनेर उपस्थित भैसकेको थियो । बत्तीहरू जूनकीरी, पुतलीहरू कुरेर बस्न थालेका थिए । सायद भोक र प्यास मान्छेलाई मात्र लाग्दैन । हामी कालभैरव मन्दिर हुँदै असनतर्फ लाग्यौँ । म उनको पछिपछि हिँडिरहेको थिएँ । समयको पछिपछि पृथ्वी हिँडेजस्तै चुपचाप या पृथ्वीको पछिपछि समय हिँडेजस्तै । जे होस्, म पछिपछि थिएँ ।
मानिसहरूको जुलुसमा हामी पनि समाहित भयौँ । जसरी एउटा सानो खोला नदीमा समाहित हुन्छ । ठेलमठेलको नि:स्वार्थ राजनीतिमा मिसियौँ । हिँडिरहेका थियौँ । अचानक मेरो हातमा अनौठो स्पर्श भयो । हेरेँ । हातले मलाई तानिरहेको थियो । रेलको डिब्बाले पछाडिको डिब्बा तानेजसरी ।
म सपेराले खेलाइरहेको सर्पजस्तो भएँ । हात कसैको थिएन । साराकै थियो । उनलाई हेरेँ । हल्का लामो केश मात्र देखें । केशमा केटाकेटी जसरी पिङ खेलिरहेको थियो बतास । जो उनको केश र हिडाइसँगको संभोगले जन्मिएको थियो । फर्केर हेरिन् । मैले आफ्नो नर्भसनेस लुकाउन फेरि एक पफ कृत्रिम मुस्कान मिल्काएँ । उनले पनि रहस्यमय तरिकाले दाहिनेपट्टिको ओठको कुना अलिकति चलाइन् । हामी महाबौद्ध पुगिसकेछौँ । रोकिएर मेरो छेउमा उभिइन् र मलाई हेरिरहिन् निकै बेर । मैले फुस्स–फुस्स छोडिरहेँ लाजसरिका मुस्कानका पफहरू । उनले पनि त्यसै गरिन् । केही समयसम्म यो क्रम निरन्तर चलिरह्यो । चल्दाचल्दै ऊ बोली ।
‘यहाँबाट सीधै गयो भने मेन रोड पुगिन्छ । समयलाई जित्न खोजिरहेका बौलाहा गाडी र गाडीभित्रका मान्छेहरू मात्र देखिन्छ । बरु फर्कौं ल फेरि उतै !’
स्वीकृतीसहित टाउको हल्लाएँ । खासमा म हातबाट सुरु भएर मुटुसम्म असर पुगेको स्पर्शले रन्थनिइरहेको थिएँ । हामी भीडमा उसैगरी फर्कियौँ जसरी पहिले आएका थियौँ । बस्, दिशा मात्र परिवर्तन भएको थियो । गन्तव्य मात्र परिवर्तन भएको थियो । वसन्तपुर आइपुगेर एउटा खाली बेन्चमा आफूलाई टक्र्याएँ । उनले पनि मेरो नजिकै आफूलाई टक्र्याइन् । मानौं, हामी कुनै रक्स्याहाले टेबलमा भरेर राखेका गिलास हौँ— मात्र चियर्स गर्न बाँकी छ ।
महिनामा एकपल्ट मात्र नुहाउँछु र पानी बचाउँछु समाजका लागि